Beeralay ku diriray Hiiraan oo heshiis la dhex-gay iyo dowladda oo shir ugu qabanaysa Beledweyne – Radio Daljir
Beeralay ku diriray Hiiraan oo heshiis la dhex-gay iyo dowladda oo shir ugu qabanaysa Beledweyne
Agoosto 27, 2013 4:49 b 0
Beledweyn, August 27, 2013 – Deegaanka Deefow ee gobolka Hiiraan waxaa dhowaan dirir ku dhexmartay beelo wada-degan, dagaalka ayaa markii hore ka aloosmay dhul beereed.
Maamulka dowladda federaalka ah ee gobolka Hiiraan ayaa howshaas dhex-dhexaadin ka sameeyey, waxaana haatan soo baxaya warar sheegaya in lagu guulaystay qaboojinta xiisada u dhexaysay beelaha.
Gudoomiye ku xigeenka maaliyada ee gobolka Hiiraan ee dowladda Soomaaliya Khaliif Cabdi Cumar, wuxuu sheegay in ay meel-mariyeen xabad joojin, wuxuu intaas ku daray in ay howsha beelaha si buuxda u dhamayn doonaan.
? Heshiis buuxa ayaa la dhex-dhigi doonaa, oo waxaan qorshaynay shir arrintaas lagu dhamaynayo oo dhowaan ka dhacaya Beledweyne? ayuu hadalkiisa ku daray Mudane Cumar.
Deefow dagaalka ka dhacay waxaa ku dhintay 3 ruux oo dhinacyadii dagaalamay hal qofna dhaawac ayaa soo gaaray, xiisaada dagaalka ayaa ahayd mid saamaysay nolosha deegaanka oo cabsi ku abuurtay bulshada beeralayda ah.